Koodhadhka badhanka leh badhanka LED-ka - Patent-ka cusub ee Apple | TeraNews.net
macaan kery fuck shaqadeeda. www.xvideos4.pro
ka soo jiidasho qodista gadaashiisa.tamilsex koleejku mataano bj iyo fuck.
Koodhadhka badhanka leh badhanka LED-ka - Patent-ka cusub ee Apple
qoraaga Nikitin Eugenius La daabacay 03.01.2021
Waa wax lala yaabo in Shiinuhu uusan ka fikirin tan, kuwaas oo ka iibiya agabyada PC-yada ee adduunka oo idil. Si kastaba ha noqotee, malaayiin iibsadayaal ah ayaa iibsaday teebabka Shiinaha ee leh hieroglyphs dukaamada internetka. Ka dibna - waxay ku qaabeeyeen istiikiiro luqadda wax ku biirinta loo baahan yahay. Kiiboodhka leh badhamada LED-ga ayaa ah rukhsad cusub oo Apple ah. Way fududahay in la sameeyo boqollaal ka mid ah laba jibbaaranaha LED-ga. Oo ku rakib iyaga badhanka badhanka. Iyo, haddii dhinacyada PC-yada ay su'aal ka taagan tahay, markaa laptops-ka xalka noocan oo kale ah waa mid aan laga fikiri karin inuu dalab yahay.
Patent-ka laftiisa waxaa ka mid ah wax ka badan iftiinka badhanka LED-ka. Waxay taageertaa taabasho badan, jawaab celin cadaadis iyo jawaab celin taabasho leh. Taasi waa qabow. Qiyaas laptop oo leh teknoolojiyadaan oo dhan ama kumbuyuutar lagu ciyaaro. Hadda kahor waxaan rabaa inaan iibsado qalab noocan oo kale ah, u habeeyo naftayda oo waxaan ku raaxeystaa dhammaan faa'iidooyinka qarniga 21aad.
Sida ay ku fikireen hal abuureyaasha shirkadda Apple, fure kasta wuxuu noqon doonaa shaashad yar oo LCD ah. Waxay noqon kartaa OLED, tusaale ahaan. Ama farsamo la mid ah. Badhamaduhu waa inay noqdaan kuwo hufan. Tan macnaheedu waa aasaaska furayaashu waa muraayad, dhoobada ama safayr.
Ayaa ubaahan kumbuyuutar leh badhannada LED-ka
Way cadahay in qeybta miisaaniyada ay ka fududahay in lagu dhajiyo istiikarada furayaasha. Laakiin qaybta dhexe iyo tan sare, xalka ayaa ka heli doona codsi isaga laftiisa ah.
Dadka aragga naafada ka ah ayaa ka dhigi kara waraaqaha mid ka weyn. Ama beddel midabka iftiinka dambe. By habka, goobtii ugu dambaysay horeba si firfircoon ayaa loo isticmaalaa adduunka oo dhan - tusaale ahaan kumbuyuutar gadaal gadaashiisa.
Looma baahna in la sameeyo laptops gobollada qaarkood. Laatiinka, Cyrillic, hieroglyphs - milkiilaha laftiisu wuxuu dejiyaa kumbuyuutarka la doonayo naftiisa.
Ciyaaraha, waxaad u qoondeyn kartaa furayaasha xakamaynta. Ilaa heer aad ku rakibtay sawir tilmaamaya waxqabadka badhanka.
Sidoo kale waxaa loo samayn karaa naqshadeeyayaasha, barnaamij-yaqaannada iyo dadka ka shaqeeya sawirrada iyo muuqaalka fiidiyaha.
Boodhadhka badhanka leh badhamada LED-ka waa tallaabo mustaqbalka ah. Haddii si sax ah loo sameeyo, waxaad heli kartaa natiijooyin fiican. Iyadoo la tixgelinayo khibrada Apple ee soo saarista tiknoolajiyada kombiyuutarka, hubaal qalad ma jiri doono. Adduunku dhawaan wuxuu arki doonaa teebabadaha cusub ee suuqa ku jira oo wareejin doona.
Waxaa jira kaliya hal cilladood oo shatigan. Shiineeska waxaa laga yaabaa in lagu soo rogo cunaqabateyn haddii ay bixiyaan xalal jaban oo leh badhannada LED-ka ee suuqooda. Taasi waa, kaliya calaamadda Apple ayaa yeelan doonta kumbuyuutar noocaas ah, qiimihiisuna wuxuu noqon doonaa mid ku habboon. Ku sii nagaan doono uun ciyaar go'aamada sumadaha halista ah ee Taiwan.
Qaboojiyaha Microsoft ee Taxanaha X-Style Mini ee Microsoft
Oclean W10 Flosser Water - Dhakhtarkaaga Ilkaha
Imilab w12 iyo w11 - dib u eegista saacadaha caqliga leh ee cajiibka ah
Shiinuhu wuxuu isku dayayaa inuu gacantiisa ka qaniino - siyaasadda qariibka ah ee dalka
Heerka USB-C 2.1 wuxuu taageeraa awoodda ku-dallacsiinta illaa 240W
Google Chrome oo aan xayirin xayeysiiska - cusub
Kiraynta VPS Server waa habka saxda ah ee ganacsiga
Muuqaalka muraayadda ee meeraha Dunida - fikradaha cusub ee saynisyahannada
Bill Murray waa jilaa halyeey ah oo ka tirsan warshadaha filimada adduunka
Sanduuqyada TV TOP 5 ee Shiinaha laga soo bilaabo 50 illaa 100 $ oo leh dulmar guud
Keydka Wireless-ka ee VONTAR: Fidinta, Bluetooth
Kiiskee PC ah ayaa ka fiican in la doorto - cabirrada
Ragga ugu sareeya: Maverick - taxanaha taxanaha 1986 ee sanadka
jidaynayey qoyan gacaliye dilettante oo qurux badan oo ku raaxeysta ciyaaraha afka ayaa siinaya dharbaaxo weyn.
xxx asiya jidh kulul oo camgirl ah oo ku jees jeesaya niyadda.
xxx hiwaayadda euro dude nuugaa.